Amacici Amadoda: Iindidi kunye neengcebiso zoKhuseleko | Amadoda aQinisekileyo
IsiJamani sasePortillo | | Izinto ezenziwayo, fashion
Kude kube kudala ingaqhelekanga ukubona indoda enamacici okanye ihlaba. Kukho iintlobo ngeentlobo zeemodeli zamacici zamadoda kunye neendlela ezahlukeneyo zokwenza. Phambi kokutsiba kwisithuba kwaye unikele ngokungacwangciswanga, kubalulekile ukuba wazi yonke into malunga nokufumana impilo. Omabini amacici kunye nokugqobhoza kunokubangela iingxaki zempilo ezinjengosulelo kunye nentlungu. Ke ngoko, kule posi siza kuthetha ngayo yonke into enxulumene nayo amacici amadoda nokugqobhoza.
Ngaba uyafuna ukufunda okungakumbi malunga nesi sihloko?
1 Isitayela samadoda
2 Uyenza njani icici
3 Iingcebiso ngezeMpilo
4 Amacici amadoda
Ukuziqhelanisa kwamacici nokubhoboza kuvela kwiinkcubeko zakudala ezinje ngeMeya. Namhlanje akuqhelekanga ukubona abantu benamacici ngaphakathi amashiya, impumlo, iingono, ulwimi nkqu namalungu angasese. Ngesi sizathu, kubalulekile ukuba izinto kunye nemingcipheko yalo mkhuba yaziwe.
Kwaye la macici ayinxalenye yesitayile samadoda amaninzi. Abanye banomdla kangangokuba bayidibanisa nombala wempahla ukongeza inkangeleko yazo. Into elungileyo ngamacici okanye ukugqobhoza kukuba ayisiyonto yobomi. Okufanayo akunakuthethwa ngetattoos. Ukufumana itattoo sisigqibo esinzulu esingafanele kuthathwa kancinci. Into ehlala ihleli kwimeko yamacici ngusiva. Ngamanye amaxesha kwaye kuxhomekeka kwindawo, isenokungabonakali ngabantu, kodwa ikhona.
Enye into ekufuneka uyiqwalasele yintlungu. Ukubeka icici okanye ukugqobhoza kukugqobhoza ulusu lwakho. Le yinkqubo ethi, Nokuba yenziwe ngeyona ndlela ibhetele, ibuhlungu. Kuyacetyiswa ukuba ucinge ngale nto kakuhle ukuze kungabikho kuzisola kamva.
Nje ukuba umntu athathe isigqibo sokuba kwenziwe icici, kufuneka aye kwiziko lobuchwephesha ebaleni. Elinye icebo elihlala linikezelwa kukujonga ixabiso ukuya kumda othile. Kuyinyani ukuba kukho ukhuphiswano oluninzi kweli hlabathi kwaye kukho amawakawaka eendawo onokuya kuzo. Nangona kunjalo, ukufumana icici yinto enzulu ngakumbi kwaye ibuthathaka kwaye, nokuba kuya kufuneka uhlawule enye into engaphezulu, kufanelekile. Kungcono ukuhlawula ngaphezulu kunokuzisola ngokwenza oko kwindawo encinci kodwa abaziingcali.
Uyenza njani icici
Ukwenza umngxunya wecici, kuya kufuneka ulandele imigaqo yezempilo nokhuseleko ukuze ivele kakuhle. Abasebenzi abayenzayo kufuneka baqeqeshwe ngokupheleleyo kuyo. Kuya kufuneka ucinge ukuba into ekhangeleka ngathi ngumhombiso ophucula isitayile sakho inokuba yingxaki.
Ngexesha lenkqubo, kufuneka kusetyenziswe into engenabungozi kunye nokusetyenziswa kube kanye. Qiniseka ukuba ubukele ingcali isusa izixhobo kwisikhongozeli esitywiniweyo ngaphambi kokuyisebenzisa kuwe. Umpu ogqobayo usetyenziswa ezindlebeni kuphela. Oku kwenziwa kuba ayinakho inzalo eyaneleyo. Ke ngoko lumka ukuba ungayisebenzisi nawe kwelinye ilungu lomzimba.
Ukuba zonke ezi zikhokelo zempilo azinikwanga, ungasasaza izifo ezifana nehepatitis, igcushuwa, isifo sokuqina kwemihlathi kunye noGawulayo.
Ngokubhekisele kwimathiriyeli yamacici, Kufuneka zenziwe ngentsimbi yotyando. Ayisiyiyo nayiphi na into exabisekileyo. Ingenziwa kwakhona nge-titanium okanye igolide ubuncinci be-14 carats. Oku kunegalelo kuthintelo komzimba okanye umzimba ngokwala izinto. Nangona ezi zinto zibiza kakhulu, kufanelekile ukuba utyalomali. Siyazisindisa kwiingxaki, usulelo kwaye sizenze zihlale ixesha elide. Nangona amacici engekho ebomini ukuba asifuni, ahlala enziwe ixesha elide.
Isilivere ayikhuthazwa, kuba ibangela usulelo. Ngokubanzi, amagunya ezempilo alumkisa oko ukugqobhoza akufuneki kwenziwe ukuba uphethwe lulo naluphi na uhlobo lokugula okanye usulelo. Ngale nto ubhekisa kwingqele elula. Oku kwenziwa kuba umzimba ngala maxesha unezikhuselo ezimbalwa. Kwakhona, ukuba une-acne, i-dermatitis, ezinye i-herpes, i-psoriasis okanye utyekelo lokuba neentsumpa, ayisiyonto ilungileyo. Kuya kufuneka ungayinxibi ukuba uthatha abacoci gazi, unengxaki yegazi okanye isifo sentliziyo.
Nje ukuba ubeke icici okanye ukugqobhoza kufuneka ulandele ezi zikhokelo zilandelayo ukuze zingosuleli kwaye zikhokelele kwiingxaki ezinokubakho:
Hlamba izandla zakho phambi kokuba uthinte isihombiso
Yicoca kwaye uyihlukuhle kabini ngemini
Musa ukuhlamba echibini okanye elunxwemeni ukuze ungaphazamisi unyango
Ukuba ubeke icici kulwimi lwakho okanye emilebeni, akukhuthazwa ukuba usele utywala okanye ukutya okuqholiweyo. Itshungama ilondolozelwa ixesha elizayo. Kufuneka usebenzise ucoceko olugqithisileyo lomlomo emva kokutya, ukusela okanye ukutshaya
Ukuba awuthobeli izindululo zokhuseleko unokuba neengxaki. Olunye usulelo lwasekhaya, ukopha kunye nezinye iingxaki zinokuvela ukuba ifakwe kwindawo ene-vascularization enkulu. Oku kuhlala kwenzeka ngakumbi kwindawo yolwimi. Kananjalo kunokwenzeka ukuba amazinyo aqhekeke, ulwimi lube ndindisholo okanye ilahleko yokuziva ungcamle.
Kukho iintlobo ezininzi zamacici amadoda:
Eyokuqala yile icici. Babengamajikazi okuqala ukunxiba amadoda kwiminyaka 89-90.
Olunye uhlobo zi amacici enedayimane. Nguye uDavid Beckham wayenxibe ngomhla wakhe kwaye yenze ukuba ifashoni. Batsala amehlo kakhulu, ke kungcono ukuba ubakhathalele. Yisebenzise ukuba isitayile sakho sikuvumela ukuba usitshatise okanye baya kuba banamathele kakhulu. Okuncinci kokukhazimla, kokukhona kuya kusiba ngaphezulu.
Uhlobo lokugqibela zezi ukwanda. Ukuba ufuna ukwahlula phakathi kwawo onke amanye amadoda afake amacici, uya kubheja kukwanda. Ingxaki kulo mfo kukuba yeyona nto ikufutshane kwi tattoo. Ndiyathetha, phantse ubomi. Ukuba ngenye imini uyazisola kwaye ufuna ukuyisusa, ulusu lwendlebe luya kukhubazeka. Akufani nokuba nomngxunya omncinci wecici.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokuthatha isigqibo sokusebenzisa amacici amadoda kwiintlobo zawo ezininzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » fashion » Amacici amadoda